Waraaqaha ugu wanaagsan ee lagu qoro astaamaha Logo: Ilaha farta | Abuurista khadka tooska ah
Kordhinta ganacsiyada khadka tooska ah, baahida loo qabo naqshadeeyayaasha hal abuurka ah si loo horumariyo nuxurka ganacsiga astaanta ayaa muhiim ah. Hadda ganacsiyado badan ayaa imanaya internetka, ma ahan oo keliya eCommerces, laakiin sidoo kale noocyada kale ee bogagga shabakadda, dhammaantood waxay leeyihiin baahi isku mid ah: in la abuuro astaan. Iyo naqshadeeye ahaan, waxaad u baahan tahay inaad heysato wanaag font loogu talagalay astaamaha qanciya dhammaan macaamiishaada.
Sababtaas awgeed, maanta waxaan diiradda saari doonnaa inaan ku siinno noocyo kala duwan oo loogu talagalay astaamaha, kaliya ma ahan kuwa ugu fiican, laakiin kuwa aadka loo raadinayo, kuwa xorta ah, kuwa siin doona taabashadaas gaarka ah mashruucaaga you Ma rabtaa inaad ogaato kuwa aan soo xulnay?
1 Astaamaha noocyada noocyada astaamaha
2 Noocyada noocyada qaababka qoraalka loogu talagalay astaamaha
3 Waraaqaha astaamaha: kuwani waa kuwa ugu fiican
3.4 Calaamadaha Calaamadaha: Didot
3.7 Calaamadaha Calaamadaha: Sabo
Astaamaha noocyada noocyada astaamaha
Doorashada font for logos waxay u egtahay mid fudud, laakiin runti maahan. Noocyada noocan ah ee xarfaha loogu talagalay astaamaha waa inay lahaadaan astaamo taxane ah si ay si dhammaystiran u gutaan himiladooda. Oo maxay yihiin kuwan? Hagaag:
Waa inay fududahay in la aqoonsado oo lagu dhejiyo xusuustaada. Si kale haddii loo dhigo, in markaad aragto, aad u aqoonsato shirkadda lagu magacaabay. Haddii aad dhigto astaan ​​si aad ah u isku-buuqsan, oo leh font aan la fahmin, si dhib leh uma awoodo inay dhex gasho dadweynaha.
In yar ayaa intaa ka badan. Sidoo kale farta qoraalka. Waa inaad maskaxda ku haysaa in il keliya, ama ugu badnaan laba, ay ka badan tahay inta ku filan. Haddii aad inbadan isticmaasho waxaad ku abuuri doontaa dareen kalsooni daro macaamiisha. Haddii macmiilkaagu yahay shirkad weyn, sharad ku isticmaal hal nooc oo keliya. Dhinaca kale, haddii ay yihiin shirkado yaryar, waxaad u dhigi kartaa font magaca shirkadda iyo mid kale oo loogu talagalay hal ku dhig (haddii ay mid leedahay).
Tag qadiimiga ah. Waxaa macquul ah inuu macmiilkaagu rabo inuu isticmaalo nooc font ah oo moodada ah, ama inuu arkay, akhriyay iwm. Isku day inaad ka saarto madaxaaga. Fashionsku waa wax soconaya aakhirkiina astaantaadu waxay yeelan doontaa taariikh dhicitaan, markaa waqti yar kadib waa inaad bedeshaa maxaa yeelay waa laga duugoobay.
Noocyada noocyada qaababka qoraalka loogu talagalay astaamaha
Muuqaal kale oo lagu xisaabtamayo ayaa ah, farta dhexdeeda, waxaa jira dhowr nooc oo noocyo ah, oo loo qaybiyay 5 kooxood oo waaweyn:
Fariimaha Serif. Iyagu waa kuwa ugu da'da weyn uguna da'da weyn, tan iyo markii aan ka hadlayno qarnigii XNUMXaad (laga bilaabo taariikhdaas waxay bilaabeen in la isticmaalo). Adiga oo ku adeegsanaya astaanta, waxaad siin doontaa muuqaal muxaafid ah, in kasta oo aysan macnaheedu ahayn qaab duug ah, laakiin xarrago leh oo casri ah.
Sans Serif farta. Kuwani waxay u sii socdaan aasaasiga, iyagoo tirtiraya qurxinta midkii hore waxayna raadinayaan inay yeeshaan xariiqyo toosan oo nadiif ah. Ujeeddadeedu waa in la caddeeyo oo ay fududaato in la fahmo lana ogaado waxa astaanta loola jeedo.
Nooca Slab Serif. Ishaani, oo ah nooc ka duwan tii hore, ayaa soo baxday qarnigii XNUMXaad waxaana lagu gartaa isku darka labada kor ku xusan. Waxay dooneysaa inay yeelato saameyn muuqaal oo adag laakiin isla mar ahaantaana si loo casriyeeyo xilliyada. Waxay ka badan yihiin wareegsan ama xagal leh, uma toosna sida kuwa kale. Taa baddalkeeda, waxay u gudbiyaan kalsoonida astaanta iyo hal-abuurka.
Farta qoraalka. Kuwani waxay bilaabeen inay soo ifbaxaan qarnigii labaatanaad waxayna soo jiiteen fiiro badan oo dhinacyo badan "gacan-qoris" ah. Waxa ay raadinayeen waa inay ahaayeen waraaqo, naftooda, horeyba u lahaa barwaaqo, naqshado kala duwan, iwm. Hadafka, oo leh curyaamadan, qaababka qaabaysan, waa in la abuuro dareen xariifnimo iyo hal-abuur.
Ilaha ilaha Sidoo kale loo yaqaan font qurxinta, waxa ay raadinayaan ayaa ah in xarfaha laftooda ay yihiin nashqado, qaab lagu ciyaarayo astaan ​​gabi ahaanba loo habeeyay (xarfaha uma baahna inay noqdaan xarfo, laakiin waa mashruuc). Wixii ay muujinayaan, waxay raadinayaan inay siiyaan dareen madadaalo, madadaalo iyo wax aan rasmi ahayn.
Waraaqaha astaamaha: kuwani waa kuwa ugu fiican
Oo, hadda, waxaan arki doonnaa noocyada noocyada xarfaha ee astaamaha aan kugula talin karno.
Kani waa xarfaha loogu talagalay astaamaha aad ku aragtay astaan ​​aad u weyn bushimaha qof walba, gaar ahaan haddii aad jeceshahay moodada. Waxaan ka hadlaynaa VOGUE. Astaanteedu waxay leedahay fartaan waana mid ka mid ah kuwa loogu isticmaalka badan yahay ganacsiyada la xiriira moodada, xarrago, raaxo, soo jiidasho, iwm.
Garamond waa a qorista oo inbadan loo isticmaalo buugaagta, maxaa yeelay waxay leedahay naqshad xarrago leh oo aan ahayn mid aasaasi ah ama fudud. Tani sidoo kale waxay leedahay wax guul ah dhabarkiisa.
Markii ugu horreysay ee la soo bandhigo waxay ahayd 1900, gaar ahaan Carwadii Adduunka ee Paris, waxyarna tartiib ayay u yeelatay maalin-ka-maalin. Waa mid aad u qeexan oo si fudud loogu adeegsado astaamo xirfadlayaal ah ama doonaya in waqti la siiyo noocyadooda.
Sida magacaba ka muuqata, fartaan waa sans-serif. Waa aasaasiga ah in ay sharad on khadadka cad, aan aad u xooganayn, oo aad u cad in la akhriyo. Kee, bandhigyo, waa qumman yahay.
Calaamadaha Calaamadaha: Didot
Xarfaha Didot waxaa lagu arki karaa astaanta Giorgio Armani. Hadaad dhug yeelato, waa nooca Serif wuxuuna laftiisa ku abuuraa naqshad xarrago leh oo taxaddar lehWaxa aad raadineyso waa inaad diirada saarto dhagaystayaal bisil.
Kuwa raadinaya naqshad casri ah, oo xoogaa ku jabinaysa khadadka toosan oo lafteeda lafteedu u muuqato sawir, waxaad leedahay Canilari. Waa far qaro weyn oo hal abuur leh.
Font-kan ayaa ka mid ah kuwa muddo dheer la isticmaalayay boodhadhka filimka Mareykanka, waana mid loogu jecel yahay naqshadeeyayaasha. Badanaa waxay diiradda saareysaa hal nooc oo ganacsi ah, maadaama qaabkeedu uu duugoobay oo aad ugu habboonaan karo qareennada, arrimaha la xiriira dhimashada, diinta, iwm.
Calaamadaha Calaamadaha: Sabo
Haddii macmiilkaagu raadinayo mashruuc la xidhiidha videogames, tan, qaabka arcade, waxay ku imaan kartaa mid waxtar leh. Isla qaabkaas awgood ayay dad badan soo jiidanaysaa waadna buuxin kartaa (taas oo aan u muuqan wax arcade ah laakiin waxay u egtahay naqshadeeye, barnaamaj, iwm. Ama khadka tooska ah, halkaas oo ah qofka macnaha siiya isha.
Mid ka mid ah ilaha ilaha qoraalka noocyadu waa tan, taas oo raadineysa u damqasho dhagaystayaasha dhallin-yarada ah uguna soo gudbiya macaan, hal-abuur iyo madadaalo. Haddii mashruuca aad gacanta ku hayso u tahay dhagaystayaal da 'yar, tani waxay ka mid noqon kartaa kuwa la isku dayo.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Khayraadka » Fuentes » Noocyada ugu wanaagsan ee lagu abuuro astaamaha
Asalka midabada leh